Jimciyadda Gargaarka Aadaminimada, Waxbarashada iyo Hormarinta ee SOHEDA, ayaa waxa ay howlaheeda sama-falka ah gacan siin uga heshaa dhinacyo isugu jira hay'ado, shakhsiyaad samafalayaal ah, aqoon-yahanno, iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, kuwaas oo tan iyo markii jimciyadda la dhisay qayb ka ahaa dhammaan dadaalada wax u qabashada dadka danta yar ee ay SOHEDA hormuudka ka tahay. Dhinacyadan u taaggan gacan siinta Jimciyadda SOHEDA, ayaa waxa ay si joogto ah u bixiyaan kaalmooyin lagu socodsiinayo barnaamijyada hormarinta waxbarashada iyo aadaminimada ee ay jimciyaddu ku caawiso dadka saboolka ah iyo kuwa ka soo jeeda beelaha la kulma takoorka hayb sooca ku dhisan ee bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ku faafsan. Sida aan warbixinno horay loogu daabacay shabakaddan ugu soo bandhignay, waxa ay shakhsiyaadkan qaarkood dusha u riteen mas'uuliyadda nolosha iyo wax-barashada qaar ka mid ah caruurta agoonta ah iyo kuwa ka soo jeeda beelaha la hayb sooco ee ay SOHEDA gacanta ku hayso. Waxana ay damaanad qaadka mas'uuliyadda caruurtaasi suurtagalisay in ay helaan wax-barasho iyo nolol wannaagsan oo aanay abid horay ugu helin. Warbixin ayaa waxa aan ku soo bandhigi doonnaa magacyada qaar ka mid ah shakhsiyaadka ay kaalmadoodu muhiimka u tahay socoshada howlaha SOHEDA, annaga oo doonayna in aan xusno kaalintooda, kuna boogaadino oo ku amaanno gacan siinta iyo garab istaagga ballaaran ee ay u fidiyaan jimciyadda si looga guul gaaro howlaha samafalka ee aan wadno. Guddoomiyayaasha 17-ka degmo ee gobalka Banaadir ayaa qayb ka ah shakhsiyaadka aan kor ku soo xusnay ee sida hagar la'aanta ah u taageera SOHEDA, waxana mid waliba oo guddoomiyayaashan ka mid ah uu ballan qaaday bixinta lacag gaaraysa 500 oo dollar, taas oo loogu tala galay socodsiinta howlaha samafalka ah ee ay jimciyaddu fuliso. Waxa aan mahad ballaaran u celinaynaa dhammaan guddoomiyayaasha degmooyinka gobalka Banaadir oo magacyadooda iyo sawiradoodu ay hoos ka muuqdaan, waxana rajaynaynaa in taageeradoodu ay suurta gelin doonto in guulo waa wayn laga soo hooyo howlaha samafalka iyo hormarinta ee ay SOHEDA u qabato dadka u baahan. 1. Cumar Mayre Macow: Guddoomiyaha degmada Dharkiinley 2. Guddoomiyaha degmada Wadajir: Axmed Cabdulle Afrax 2. 3. Guddoomiyaha degmada Waaberi: Xaawa Maxamed Cali 4. Guddoomiyaha degmada Xamar Jajab: Axmed Cusmaan Dhoorre 5. Guddoomiyaha degmada Xamar-Wayne: Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir 6. Guddoomiyaha degmada Shingaani: Axmed Xassan Yalaxow 7. Guddoomiyaha degmada Cabdicasiis: Cusmaan Muxudiin Cali 8. Guddoomiyaha degmada Kaaraan: Cabdifataax Nuur Cali 9. Guddoomiyaha degmada Shibis: Axmed Muumin Maxamed 10. Guddoomiyaha degmada Boondheere: Qaasin Cabdullaahi Xassan 11. Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda: Yaasiin Ciise Nuur 12. Guddoomiyaha degmada Howl-wadaag: Ciise Maxamuud Guure 13. Guddoomiyaha degmada Hodan: Axmed Salaad Ibraahim 14. Guddoomiyaha degmada Dayniile: Axmed Nuur Cabdi Siyaad 15. Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid: Cusmaan Maxamed Caddaawe 16. Guddoomiyaha degmada Hilwaa: Maxamed Axmed Xaashi 17. Guddoomiyaha degmada Kaxda: Cabdikamaal Shiikh Xersi
Tobanaan ka mid ah qoysaska danta yar ee ay kaalmayso Jimciyadda Wax-barashada, Bani aadamnimada iyo hormarinta ee SOHEDA ayaa waxaa magaalada Muqdisho loogu qaybiyay kaalmo raashin ah. Kaalmadan ayaa waxa ay SOHEDA ka heshay mid ka mid ah hay'adaha ay saaxiibada yihiin oo lagu magacaabo Jimciyadda gargaarka tooska ah (Direct Aid), waxa ayna kaalmadu ka koobnayd Raashin, Saliid iyo waxyaabo kale oo cunnooyinka lagama maarmaanka ah ka mida. Goobta kaalmadan lagu qaybinayay waxaa la isugu keenay hooyooyin, aabbayaal iyo caruur dhammaantood ka soo jeeda bulshada la dhibaataysan takoorka hayb sooca ku dhisan iyo saboolnimada, kuwaas oo markii ay guddoomeen raashinka iyo kaalmooyinka kale wajiyadooda laga dheehan karay sida ay ugu faraxsanaayeen taageerada loo fidiyay. Jimciyadda SOHEDA ayaa iyada oo kaashanaysa hay'ado iyo shakhsiyaad samafalayaal ah waxa ay had iyo jeer ku dadashaa taakulaynta dadka danta yar ee u baahan caawinaadda, gaar ahaanna kuwa ka soo jeeda beelaha la hayb sooco oo saboolnimo iyo takoorka iyaga ka dhanka ah darteed uga soocmay bulshada inteeda kale.
Jimciyadda waxbarashada iyo hormarinta ee SOHEDA ayaa waxa ay gacan siin muhiima ka heshay dhallinyaro Soomaaliyeed, kuwaas oo isku howlay in ay ka qayb qaataan dadaalada ay jimciyaddu ugu jirto wax barista caruurta kasoo jeedda beelaha la takooro ee aan haysan dhaqaale ay wax ku bartaan. Ururka dhalinyarada nabadda qaranka Soomaaliya ayaa deeq ka kooban agabka wax-barashada sida Buuggaag iyo Qalimaan waxa ay gaarsiiyeen caruurta wax ku barata dugsiga Abii Xaniifa, kuwaas oo ay noloshooda iyo wax-barashadooda gacanta ku hayso SOHEDA. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururkan oo ay la socdaan shakhsiyaad magac ku dhex leh bulshada sida guddoomiyihii hore ee degmada Xamar-Jajab mudane Maxamed Yare ayaa waxa ay deeqdan agabka waxbarasho ah u qaybiyeen illaa 170 caruur ah oo isugu jirta agoon iyo kuwa ay qoysaskoodu dan-yar yihiin oo dugsiga dhigta. Waxaa qaybinta deeqdan goob-joog u ahaa aas aasayaasha jimciyadda SOHEDA oo kala ah xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale, iyo xildhibaannad Khadiija Maxamed Diiriye. Caruurta ayaa iyaga oo farxad la dhoolla-caddaynaya waxa ay mid mid u guddoomeen Buugaagta iyo Qalimaanta ay dhalinyarada samafalayaasha ahi ugu deeqeen. Aas aasayaasha iyo howl-wadeenka jimciyadda SOHEDA ayaa uga mahad naqaya ururkan dhalinyaro sida xilkasnimada leh ee uu ugusoo gurmaday caruurta ay jimciyaddu taageerada waxbarasho iyo noloshaba siiso. Waxaa soo kordhaya tirada samafalayaasha Soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan ee bulshada ka tirsan, kuwaas oo u baratamaya in ay kaalin mug leh ku yeeshaan gargaarka ay SOHEDA u fidiso caruurta iyo dadka kale ee saboolnimada iyo takoorka haybta ku dhisan uga soocmay bulshada oo aadka ugu baahan cid caawinaad siisa.
Xildhibaan Mustaf Sheikh Cali Dhuxulow oo horay usoo noqday wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa ah mid ka mida mas'uuliyiinta kaalinta ka gaystay howlaha ay jimciyadda SOHEDA ee waxbarashada iyo hormarintu ugu gurmato caruurta kasoo jeedda beelaha la hayb sooco ee aan haysan cid ka caawiso nolosha iyo waxbarashada. Mudane Dhuxulow ayaa waxa uu dhowr jeer oo hore ku dhaqaaqay tallaabooyin uu ku garab istaagayo jimciyadda SOHEDA, wuxuna sidoo kale ka mid yahay shakhsiyaadka samafalayaasha ah oo tabarucaad dhaqaale oo joogta ah siiya caruurta isugu jirta agoonta iyo saboolka ee kasoo jeeda beelaha la hayb sooco. Mid ka mida dhaq-dhaqaaqyadii ugu muhiimsanaa ee uu xildhibaanku sameeyay sanadkan gudihiisa si uu u caawiyo caruurta ay jimciyadda SOHEDA gacanta ku hayso, ayaa waxa ay ahayd qabashada munaasabad qado sharaf ah oo uu ku marti qaaday tiro ka badan 50 caruur oo lagasoo dhex xulay caruurta ay jimciyadda SOHEDA gacanta ku hayso. Hotelka SYL ayaa 8-dii bishii May ee sanadkan waxaa la isugu keenay caruurtan oo ay sidoo kale la socdeen howl-wadeenka jimciyadda SOHEDA qaarkood. Waxaana halkaas goob joog ku ahaa xildhibaanno iyo shakhsiyaad caan ah oo bulshada ka tirsan. Caruurta ayaa iyaga oo farxad badan ay wajiyadooda ka muuqato waxa ay ku kulmeen miiska qadada iyaga oo uu la fadhiyo xildhibaanka iyaga casuumay ee munaasabaddaasna maal galiyay mudane Mustaf Dhuxulow. Ka dib qadada oo si qurux badan u dhacday, waxa uu xildhibaan Dhuxulow lacag ugu deeqay caruurtii goobta timid si uu niyadda ugu dhiso una dhiirrigaliyo. Markii lacag qaybinta ay dhammaatayna waxa uu xildhibaanku soo raacay caruurtii agoonta ahayd oo uu ku hubsaday basaskii guryahooda dib ugu celin lahaa, isaga oo mid mid u gacan qaadayay caruurta marka ay korayaan baska si uu u sagootiyo. Mustafa Dhuxulow waxa ay dad badan oo bulshada Soomaaliyeed ka tirsan ku tilmaamaan in uu yahay xildhibaan iyo siyaasi u gacan furan caawinta danyarta, gaar ahaanna caruurta danta yar oo marar badan uu u sameeyay barnaamijyo lagu taageerayo.
SOHEDA iyo wax-qabadkeedii 2014
Sanad Guurada 2aad ee SOHEDA
Filim ku saabsan Waxbarashada Madaniga ee Soomaalida
Dib u dhiska nidaamka waxbarashada Soomaaliya
Keydka Maqalka iyo Muuqaalka